Waan Dhaaranayaa! Mise waa inaan | Martech Zone
Waan Dhaaranayaa! Mise waa inaan
Sabtida, Janaayo 27, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Paula Mooney ayaa qoray dhowaan gelitaanka ku saabsan bloggers cussing. Waan xiiseynayaa waxa aad u maleyneyso:
Haddii aan runta u sheego, waxaa jira baloogyo kooban oo aan booqdo halka aan si sax ah uga akhriyo… dhammaantood waxay noqdeen kuwo kaftan ah. Waxaan u halgamayaa inaan ku dul ekaado baloogyada xajinaya ama dhaaranaya sabab la'aan, in kastoo. Haddii la yiraahdo xanaaq dartiis, runti dib uguma soo laaban doono booqasho labaad.
Seddex sababood oo ah inaadan kuxirin bartaada:
Erayadaada shabakada ayaa laga yaabaa inay ka sii dheeraadaan sidaad ahaan doonto. Waxay noqon doontaa nasiib darro in lagu xasuusto cussing.
Waxaa jira ereyo badan oo aadan u malaynaynin inaad waligaa maqashay… iskuday kuwa cusub.
Cussingku wuu xumeyn karaa qof, qashinku ma xumayn doono qofna.
La wadaag fikirkaaga. Miyaan si fudud u noqonayaa a curmudgeon? Xusuusin: Majiro!
Mac Qurux Badan
Iska ilaali, halkan waxaa imanaya Flex!
Jan 27, 2007 saacadu markay ahayd 10:38 PM
Tani waa wax wanaagsan! Kaliya kaftan, Douglas.
Waad ku mahadsan tahay qaylada.
Jan 28, 2007 saacadu markay ahayd 1:02 PM
Waxaan ka helay xiriiriyahan Lifehacker maanta dadkaas u baahan eraybixinno qaarkood:
Jan 28, 2007 saacadu markay ahayd 1:17 PM
Mid ka mid ah baloogyada aan raaco waxaa ku jira qadar badan oo cay ah. Qofka ayaa si cad u dhaawacay jihada warshaddiisu u socoto, waxayna umuuqataa sida kaliya ee dareenkiisa si dhab ah loogu muujin karo. Uma muuqdo inuu ku dhaaranayo qoraallada aan la xiriirin warshadaha. In kasta oo aan u malayn maayo in afkiisu ku habboon yahay, haddana waa iska cadahay in dareenkiisa la dhaawacay, taasna waxaan ka soo qaadan karaa xulkiisa luqadeed.
Kuma dhaaran doono barteyda. Waxaan rabaa kuwa ku dhex wareegaya maaddadayda inay diiradda saaraan waxa ku jira, oo aan ahayn luqadda loo adeegsaday gudbinta.
Jan 28, 2007 saacadu markay ahayd 4:43 PM
Cussing-ka ayaa aniga ii jeedda, waxaanan arkayaa dumar badan oo adeegsanaya ereyo cay ah ama ereyo haddii kale waxay kaa heli lahaayeen af ​​saabuun ka buuxo maalintayda. Waxay u muuqataa inay u maleynayaan inay iyaga ka dhigeyso mid qabow, ama waa inay dhab ahaantii dareemaan madax-bannaanida ku filan oo aan ka walwalin waxa dadku u malaynayaan. Dadka badankood kuuma sheegi doonaan; waxay iska ilaalinayaan bartaada internetka! Haddii qofku iska celin kari waayo adeegsiga ereyada habaarka ah ee ku jira mareegtooda, markaa uma baahna inay wax ku qoraan. Sida la soo sheegay, waxay ku dhowdahay makiinadaha raadinta muddo ka badan inta aan dooneyno inaan ka fikirno!
Jan 28, 2007 saacadu markay ahayd 7:04 PM
Waxaan u maleynayaa in ku dhaarashada qunyar socodka ay caadi tahay. Laakiin haddii qoraalo kasta oo kale ay yihiin ciil ay ku jiraan ereyo cay ah, waxaa laga yaabaa inaan joojin lahaa akhriska.
Si fudud looma baahna.
Jan 29, 2007 saacadu markay ahayd 2:00 PM
Waad ku mahadsantahay bilaabida dooda, Doug. Waxba igama gelin maqalka ama aqrinta afxumo, mana sameyn doono naftayda. Xaqiiqdii waxaa jira habab badan oo codkar ah oo is muujiya, xitaa xanaaq. Haddii aan akhristo blogger mar sameeya, iga celin maayo inaan soo laabto. Haddii ay caado noqoto, waan iska ilaalin lahaa goobtaas.
Jan 29, 2007 saacadu markay ahayd 2:33 PM
Shakhsiyan waxaan u maleynayaa in dhaarta dhaarta ay tahay uun ereyo xambaarsan saameyn gaar ah U isticmaal si habboon, si aan munaasab ahayn.
Jan 29, 2007 saacadu markay ahayd 2:52 PM
Sterling, waxaan u maleynayaa isticmaalka ereyada dhaarta ee saameynta gaarka ah kaliya waxay muujineysaa sida yar ee aan ugu haysanno carrabkeena ama laga yaabee luqadda Ingiriisiga. Aniga ahaan, ma jiro hab 'ku habboon' oo lagu habaarayo ama lagu dhaarto. Way ila xanuun badan tahay inaan maqlo dadku iyagoo adeegsanaya ereyo gaar ah sida ay ahaayeen kuwa caadiga ah, maalin kasta erayada (waxay ku noqonayaan sidaas dhalinyarada), markay runti dhaawaceen dabeecadooda
Jan 29, 2007 saacadu markay ahayd 3:00 PM
Oo muxuu ereyadan u gef u yahay? Sababtoo ah waxay ka soo baxaan afafka Saxon ama Celtic. Haddaan idhaahdo “koobi!” ama "saxarada!" cidna kuma xumaato. Ugudambeyn, waa uun cuqdad jinsiyeed oo loo hayey kun sano.
Jan 30, 2007 saacadu markay ahayd 4:09 PM
Anigu waxaan ku jiraa cusbooneysiinta, ma daneeyo inaan ku sameeyo boggeyga iyo macho ruff agagaarka geesaha wiilka saboolka ah, wax badan ma dhaarto. Waxaan ku sugnaa maqaaxi ku taal Baltimore dhawaana 2 marwo ayaa f erey bixin iyo erey bixin aad u badan waan ka xumaaday. Kamaan hadlin laakiin way i dhibtay. Waxaan u arkaa caqliga wanaagsan iyo daacadnimada Paula inay tahay su'aal weyn. Haddii Paula ay tiraahdo sax maahan, halkaas ayaad ku haysataa
Jan 30, 2007 saacadu markay ahayd 4:21 PM
JD, ninkaygu wuxuu yidhi, markuu maqlo haweenay sidan u hadlaysa, waxay ka dhigtaa dhawaaqa aw…. Kaliya waa ila sheekaysiga qashinka, oo qasab kuguma aha inaad sameyso. Laakiin, waxay u muuqataa inay taasi tahay 'isbeddelka' maalmahan ka dhex jira dad aad u tiro badan, umana maleynayo inay wax yar ka caawinayso iyaga.
Jan 31, 2007 saacadu markay ahayd 5:36 PM
Barb, ninkaaga ayaa caqli leh waana ku raacsanahay.
Jan 30, 2007 saacadu markay ahayd 4:36 PM
Waxaan ku raacsanahay in 99% waqtiga, habaarku haba yaraatee aan loo baahnayn. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhacdooyin yar marka ay runti tahay sida ugu fiican ee lagu muujiyo sidaad wax u dareemayso. Shakhsiyan, ma xasuusan karo waligay habaar baan ku dhajiyay boostada, laakiin kama reebi doono.